कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रणमा आउँदैन्, हिजोको जस्ताे दैनिकी परिवर्तन गुर्नपर्छ : डाक्टर रोशन पोखरेल – Merodesh.news
नेपालमा ५९ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । कोरोना परीक्षका लागि दायरा बढाइएको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाको सम्भावित जोखिम र अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विषेशज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलसँग संवाद गरेका छौं । प्रमुख विषेशज्ञ डाक्टर पोखरेलसँग गरिएको सम्बादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
नेपालमा ५९ जना संक्रमित देखिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा जोखिमयुक्त प्रदेश कुन हो ?
मन्त्रायलको सूचिमा दुई नम्बर प्रदेश बढी जोखिमममा छ । २ नम्बरमा केही दिनयता संक्रमित भेटिरहेको छ । प्रदेश १ मा ३१ संक्रमित भेटिएको छ । तर १ नम्बरमा बाह्रदशीमा भेटिएयता नयाँ भेटिएका छैनन् । पछिल्लो फोकस दुई नम्बर प्रदेशमा छ । अन्य प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ ।
संक्रमण छिटफुट देखिरहेका छन्, लकडाउन जारी छ । अबको चुनौती के हो ?
अबको चुनौती लकडाउन कसरी खोल्ने भन्ने छ । खोल्न त खोल्नु पर्छ । तर कसरी खोल्ने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । अब खोल्दा आवश्यकता कम भएकाहरु खोलौं । कपाल काट्ने, रङ–सङका पसलहरू भए, पार्लरहरू भए । तीनका हकमा लकडाउन यतावत राखौं ।
लकडाउनमा काम त गर भनेका छौं । तर बजारमा सजिलो बनाएका छैनौं । अब जोखिम कम भएका स्थानहरूमा सतर्कताका साथ लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर वोर्डरचाहिँ कडा राख्नुपर्‍यो । बोर्डरबाट आउने सामानहरूमा कडाई गर्नुपर्छ ।
नाकाबाट भित्रने सवारीसँगै आउने चालकको आरडीटीबाट जाँच गर्नुपर्छ । भारतबाट आएका सवारीका चालकलाई एक घण्टा रोकौं, आरिडटी जाँच गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिउ भनेर काम गरिरहेका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा सामाजिक दुरी कायम गरेर सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छौं । सामाजिक दूरी कायम रहे कोरोना फैलने क्रम रोकिन्छ ।
सामान्यतया १४ दिनभित्रमा कोरोनाको लक्षण देखिसक्छ । तर यहाँ दिल्ली जमातीबाट फर्किएको ४७ दिनपछि कोरोना देखिएको छ । किन यस्तो भएको होला ?
अहिले ८०–८५ प्रतिशत बिरामीमा लक्षण देखिएको छैन । बिरामी लक्षणविनाका छन् । पहिले लक्षण ज्वरो भन्ने थियो तर अहिले हाम्रो सूचनामा ज्वरो भन्ने नै हटाइ दियौं । धेरै ठाउँ लक्षणविनाका बिरामी भेट्यौं । लक्षण नदेखिँदा संक्रमितको ट्रेस गर्न गाह्रो भयो । अब ४५ दिनपछि देखिएको केसले गर्दा हामी झन् चिन्तित छौं ।
ती व्यक्तिमा आडिटी पोजटिभ आउनुपर्ने हो । तर पीसीआर नै पोजिटिभ आउनु हाम्रा लागी अनौठो हो । यसमा दुईवटा कमजोरी हुनसक्छ । कि हामीले राम्रोसँग हिस्ट्री लिन सकेनौं कि यो अचम्म हो । यसको अनुसन्धान गर्नु पर्छ ।
२७– २८ दिनमा भेटिएको थियो । तर ४५ दिनपछि भेटिनु अचम्म हो । यसमा विज्ञहरूले बसेर अध्ययन गुर्नपर्ने छ ।
प्रदेश १ का तीन जिल्लामा कोरोना देखिएको छ । १४ मध्ये कुन–कुन जिल्ला बढी जोखिममा छन् ?
अहिलेको अवस्थामा भोजपुर झापा र उदयपुर नै जोखिममा हुन् । उदयपुरचाहिँ रेड जोन नै भयो । अब बोर्डरसँग जोडिएका कारण सुनसरी मोरङ पनि रिस्कमा छन ।
जोखिम क्षेत्र छुट्याउने कसरी ?
यसका लागि आधार छुट्याइएको हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा हुन्छ । बाहिरबाट कति मान्छे आएका थिए । बोर्डरको अवस्था कस्तो छ । छिमेका जिल्लाको अवस्था के–के छ भनेर अध्ययन गर्छाैं । अबको अवस्थामा रातो, हरियो र पहेलो गरी तीन तह छुट्याउछौं । यसरी छुट्याउँदा ग्रिन जोनमा केके खोल्ने के नखोल्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
कोरोना परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको गुनासाहरू धेरै आइरहेका छन् किन ?
संसारभरि कहिँ पनि किट पर्याप्त छैन । कोरोना फैलिएको पनि त्यही तीन महिना जति त भयो । नेपालमा चीनबाटै ल्याउने हो । उसले नेपाललाई बेच्ने हो । उसको व्यापार हो । व्यापारीले जहाँबाट बढी नाफा हुन्छ त्यहा बेच्ने हो । तै पनि हामी जी टु जीबाट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । ६ तारिकमा थप आउँदैछ । अहिले वितरण भएका सामान पनि मन्त्रालयले नै ल्याएका हुन् ।
पहिले गाउँगाँमा स्वाब संकलन गर्न भन्दै भिडिटिएम बाँडियो । तर यसरी बाँड्न हुने थिएन । आवश्यकता रहेका स्थानमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । जिल्लासम्म पठाएर राख्न सकिन्थ्यो । सुरुमा स्थानीय तहसम्म पठाइयो । स्थानीय तहमा सामाग्री गएका छन् । तर ती सामाग्री के गर्ने भन्ने कतिपय ठाउँमा जानकारी छैन ।
परीक्षणको दायरा बढाउने भनिरहेका छौं । तर काम अघि बढेको छैन नी ?
हामीसँग पीसीआरको दायरा बढाउन ठाउँ नभएर हो । परीक्षण गर्ने स्थान १७ वटा भए । तर पीसीआरमा प्रयोग हुने एउटा सामान नभएका कारण परीक्षणको दर बढाउन सकेका छैनौं । अब बढाउछौं ।
अन्त्यमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा कोरोना कहिले पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा आउला ?
नियन्त्रणमा आउनेभन्दा पनि अब यसैसँग बाँच्न कसरी सिक्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना अहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन । अहिलको अवस्थासँग जोगिएर बाँच्न सिक्नुपर्छ ।
संसारभरि कोरोना छ । यसलाई नियन्त्रणका गर्नका लागि भ्याक्सिनमा जान सकिन्छ । तर भ्याक्सिन अहिले बन्ने अवस्था देखिँदैन । केही महिना लाग्न सक्छ । यसका विरुद्ध इम्युनिट डेभलप्ट गर्न त वर्षाैं लाग्नसक्छ । कोरोना नियन्त्रण र कन्ट्रोल हुन्छभन्दा पनि पछि गएर एचआइभी जस्तै, टिभी जस्तै हुन्छ ।
अब कोरोनाभन्दा अगाडिको जुन चालचलन थियो त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिले पार्टी जान्थ्यौं डिस्को जान्थ्यौं भने अब ती बानी बन्द हुनुपर्छ । जो कोहीसँग तीन फिट टाढै बसेर कुरा गर्नुपर्छ । जोसँग पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ । कसलाई लाग्छ थाहा हुँदैन ।
अब आफूले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । हात मिलाउने ठाउमा नमस्कार गर्नुपर्छ । विस्तारै विस्तारै कोरोनासँग जोगिने ह्याबिट बस्छ ।